Biyo-qeybiyaha → Jimicsiga • Jimicsiga • Cabbitaanka biyo ee Gym Warsaw
Ma u baahan tahay biyo-bixiye kulubka jimicsiga, jimicsiga? Shirkadda Water Point ayaa bixisa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah, cabbayaasha, isha laga helo hogaamiyayaasha adduunka ee warshadaha, oo aan annaga u nahay qaybiyaha gaarka ah ee Poland.
Hawlaha isboortiga iyo jimicsi kasta oo jireed ayaa keenaya in jirkeenu dhaqso u lunto biyo iyo macdanaha qiimaha leh ee ku jira. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in si joogto ah dib loogu buuxiyo walxahaas lana ilaaliyo biyaha jirka iyo dheellitirka macdanta.
Tani waxay fududaysaa helitaan aan xadidneyn oo nadiif ah iyo biyo nadiif ah inta lagu jiro jirdhiska. Biyo-sifeyn leh, nadiif ah oo hodan ku ah biyaha macdanta dabiiciga ah ayaa si joogto ah looga heli karaa naadiyada jimicsiga iyo jimicsiga iyadoo ay ugu mahadcelinayaan kuwa biyaha nadiifka ah ee biyaha siiya.
Dadka adeegsada naadiyada jimicsiga iyo sidoo kale dadka ka shaqeeya halkaas ayaa xaqiiqdii ka mahadcelin doona dhadhanka iyo u dhalashada biyaha joogtada ah ee laga heli karo weelka.
Bixiyeyaasha biyo-cabidda bilaashka ah ee ku xiran nidaamka biyaha siiya waxay suurtogal u tahay inay si joogto ah u isticmaalaan biyo nadiif ah oo aan dhibaato lahayn inta lagu jiro xiisadaha jimicsiga ama biririfta u dhexeeya.
Naqshadeynta casriga ah ee la heli karo, oo sifiican ugu dhigeysa gudaha naadiyada jimicsiga iyo jimicsiga, ayaa faa iido dheeraad ah halkan ku leh.
Qalabka noocan ah waxaa lagu meeleyn karaa meel kasta oo ka mid ah naadiga jimicsiga, tusaale ahaan meel loogu talagalay nasashada ama si toos ah qolka jimicsiga.
Horaa loo ogaa in si aad u ilaaliso caafimaadka iyo muuqaal caafimaad leh, waa inaad cabtaa ugu yaraan 2 litir oo biyo ah maalintii, iyo inta lagu jiro jimicsi jireed, baahida jirka ee biyuhu aad ayuu u kordhayaa qadarkana waa in la kordhiyaa.
Biyaha ayaa ku lug leh dhammaan geedi socodka kiimikaad ee jirkeena. Hawo ku filan oo jirka ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad shaqeyso oo aad jimicsi wax ku ool ah u sameysid. Biyo cabitaanka inta lagu jiro jimicsiga waxay si weyn u wanaajineysaa waxqabadka jirka oo waxay fududeysaa tababarka. Caddadka biyaha la cabbo inta lagu jiro xiisadaha jirdhiska waxay kuxiran yihiin dhererka iyo xoojinta jimicsiga, iyo sidoo kale heerkulka deegaanka.
Dadka tababbaran, meesha ay ku tababartaan, jawiga iyo qalabku sidoo kale waa muhiim. Maanta, feejignaan dheeri ah ayaa la siiyaa qaab nololeed caafimaad leh, sidaa darteed fiiro gaar ah ayaa loo leeyahay in maqaayada ay bixin karto raaxo dheeri ah, tusaale ahaan biyo nadiif ah oo la heli karo inta lagu gudajiro tababarka.
Biyo-cabbiyuhu wuxuu awoodaa inuu la kulmo himilooyinkaas oo kale, sidaas darteedna wuxuu kordhiyaa soojiidashada iyo sharafta dhismayaasha.
Bixiyeyaasha biyaha ayaa beddelaya xalka dhaqameed ee biyaha macdanta dhalada ah. Biyo-cabista biyaha waxaa laga sameeyay shirkadaha, jimicsiyada iyo naadiyada jimicsiga si loo kordhiyo raaxada ku-noolaashada meelahaas, iyo agabka ugu tayada sareeya ee loo adeegsado soo-saarista aaladahaas iyagoo waliba ka dhigaya qurxinta qolalka.
Biyaha la keenaa had iyo jeer waa cusub oo nadiif.
Biyo-cabbiyeyaasha biyo-cabidda ah waa xalliyo dabiici ah oo jaban, sidaas darteedna waxay u muuqdaan marar badan marar badan goobaha dadweynaha, machadyada, xafiisyada iyo sidoo kale naadiyada jimicsiga iyo jimicsiga.
Tikniyoolajiyadda casriga ah ee loo adeegsado qaabeynta mashiinnada ayaa u oggolaanaya hawlgal aad u fudud.
nadiifi naadiga jimicsigabiyo nadiif ah oo ku dhex jimicsiga jirdhiskabiyo bilaash ah oo jimicsiga ku dhex jiraBiyo-qabeyaha biyaha ee jimicsigaisha laga helo naadiga jimicsigakooxda jimicsigacabdi naadiga jimicsigabiyaha jimicsigabiyaha kooxda jimicsiga